Thai nhi 4 tuần tuổi phá thai có an toàn không? | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Thai nhi 4 tuần tuổi phá thai có an toàn không? | Muasalebang in Muasalebang
Njengomama, akekho ofuna ukulahla igazi labo, kodwa abanye besifazane banezimo eziphoqelelwe noma ukukhulelwa kwe-ectopic, futhi baphoqeleka ukukhipha ingane emzimbeni wabo. Abesifazane abaningi bayazibuza ukuthi yisiphi isikhathi esingcono kakhulu sokukhipha isisu 4 amasonto ekhulelwe Ingabe ukuyihlephula kuphephile? Ake sithole kanye nochwepheshe ohloniphekile.
Ukukhipha isisu akuwona umsebenzi onconywayo eVietnam, kodwa akuvinjelwe ngokuphelele, kodwa abesifazane basengakwazi ukukhipha isisu uma ngokuzithandela. Ngakho-ke, abesifazane abanesidingo sokukhipha isisu bangathola izikhungo zezokwelapha ezinedumela elihle ukuze bakhiphe isisu. Ukukhipha isisu ngesikhathi 4 amasonto ekhulelwe kubhekwa ochwepheshe abaningi njengephephile uma umzimba kamama ngaphambi kokukhipha isisu unempilo ngokuphelele.
Yiziphi izici zamasonto angu-4 ekhulelwe?
Ingane enamaviki angu-4 ubudala.
BUKHOMA I-fetus yeviki le-4 isanda kuqeda uhambo lwayo ukusuka eshubhuni yesibeletho kuya esibelethweni futhi iyimbewu encane, engaba ngu-0.6mm ubude. Ngalesi sikhathi, i-embryo isanda kuqala ukwakha izingqimba ezi-3 ze-ectoderm, i-mesoderm ne-endoderm. Lapho, i-ectoderm izoba isimiso sezinzwa, isikhumba, izinwele, .. futhi i-dermis izokhula ibe yinhliziyo, izitho zobulili, ukujikeleza, uhlaka lwamathambo, … futhi i-endoderm izoba amaphaphu, amathumbu, isibindi, amanyikwe kanye nendlala yegilo. Kodwa-ke, zonke lezi zintuthuko zisezigabeni zokuqala, ngakho-ke i-fetus ayikakakhiwa futhi ayikakathuthuki kakhulu, ubuhlobo nomzimba kamama abukasungulwa eduze. Ngakho-ke, ezimweni zokukhulelwa okungahlosiwe, engakwazi ukugcina ingane, lesi yisikhathi esifanele sokwenza inqubo yokukhipha isisu.
FUNDA OKUNYE: Ishadi lesisindo sengane isonto ngalinye abazali kudingeka balikhumbule
Amaviki angu-4 ekhulelwe unenhliziyo ye-fetus okwamanje?
Evikini lesi-4, iseli ye-zygote esanda kwakhiwa inezingqimba ezi-3: izicubu ezingaphandle, izicubu ezimaphakathi kanye nezicubu zangaphakathi ezibizwa ngokuthi i-ectoderm, i-mesoderm ne-endoderm, ngokulandelana. Lezi zingqimba ezintathu zizokwakha izitho nezicubu ze-fetus. I-ectoderm kamuva izoba isimiso sezinzwa (ubuchopho), isikhumba, izinwele, izinzipho, izindlala zobelemu, izimpande zamazinyo, nezimpande zezinwele. I-dermis ikhula ibe yinhliziyo, uhlelo lokujikeleza kwegazi, uhlaka lwamathambo, imithambo yegazi, izicubu ezixhumeneyo, nemisipha. I-endoderm ikhula ibe yi-spectrum, ipheshana lamathumbu, isibindi, amanyikwe, kanye nendlala yegilo. Izitho zomntwana seziqala ukwakheka kodwa azikabonakali. I-placenta iqala ukwakha futhi ikhiqize amahomoni abalulekile kuhlanganise neHCG. Kukhona ukunyakaza kwegazi ngomkhumbi omkhulu.
Ingane enamaviki angu-4 ubudala inenhliziyo yosana?
Amaviki angu-4 ekhulelwe unenhliziyo ye-fetus okwamanje? Ngokuvamile amasonto angu-4 ekhulelwe akakabi nayo inhliziyo yengane, emavikini angu-6-7 okukhulelwa ngemishini yesimanje ye-ultrasound, udokotela angavumela umama ezwe ukushaya kwenhliziyo yengane esiswini. Kodwa kukhona futhi izimo lapho i-fetus inamaviki angu-8 ekhulelwe.
Ngalesi sikhathi, umzimba kamama uzokhombisa izimpawu zokukhulelwa ezifana nalezi: isicanucanu, amabele nezingono zizwela kakhulu; Izitho zangasese zangasese ziningi kakhulu, zizwela kakhulu ephunga. Ukuze wazi kahle ukuthi ukhulelwe, ungaya ku-ultrasound noma uthenge ukuhlolwa kokukhulelwa ukuze uzame.
Ingabe i-fetus yamaviki angu-4 ingakhishwa?
Lapho ubala iminyaka ye-fetus, ungabali kusukela ngosuku lokuya ocansini, kodwa kusukela ngosuku umjikelezo wangaphambili wokuya esikhathini owaphela ngawo. Uma uthola ukuthi isikhathi sakho sekwephuzile futhi kunezimpawu ezingavamile, kufanele uqinisekise ngokuthatha ukuhlolwa kokukhulelwa ukuze wazi kahle ukuthi ukhulelwe noma cha. Iminyaka ye-fetus inganqunywa nge-ultrasound.
Ingabe i-fetus enamaviki angu-4 ubudala kufanele ikhishwe?
Ochwepheshe bezokubeletha kanye ne-gynecology abakhuthazi ukukhipha isisu, kodwa siqonda ngokuphelele ubuhlungu bowesifazane lapho engakwazi ukugcina “iconsi legazi”. Futhi sifuna nje ukuletha ulwazi oluwusizo ukusiza abesifazane babe nolwazi oludingekayo ukuze bakhiphe isisu esiphephile ukuze bavikele impilo yabo engcono kakhulu.
Ngakho ingabe ukukhipha isisu emavikini angu-4 nokukhipha isisu emavikini angu-4 kungaba namuphi umphumela?
Njengoba ochwepheshe behlaziye ngenhla, umbungu emavikini angu-4 uyimbewu encane nje, esanda kuqeda uhambo olusuka eshubhuni ye-fallopian ukuya esibelethweni, ubude buba ngu-0.6mm kuphela. Ukukhula kombungu kusezigabeni zokuqala kuphela, i-fetus ayikakhi futhi ayikathuthuki kakhulu, futhi abukho ubuhlobo obuseduze nomzimba kamama.
FUNDA OKUNYE: Izinto ezi-4 ezingaziwa ngombungu onamasonto amahlanu ubudala
Ingabe ukukhipha isisu okunamaviki angu-4 kuyingozi?
Ukukhipha isisu enamasonto ama-4 kunamuphi umphumela? I-fetus enezinyanga ezi-4, kulokhu i-fetus ayizange ithuthuke kakhulu, ingaxhunywanga ngokuqinile odongeni lwesibeletho, ukuqeda ukukhulelwa akunzima kakhulu uma ukukhipha isisu kuphephile ekhelini elihloniphekile akuthinti impilo kamama kakhulu. Kodwa ochwepheshe batusa ukuthi uma ungakakulungeli ukukhulelwa nokubeletha, kufanele usebenzise ukuvimbela inzalo okuphephile ukuze ugweme ukukhulelwa okungafunwa futhi kufanele “ubhekane” nemiphumela.
Uma uqinisekile futhi unquma ukuqeda ukukhulelwa, owesifazane okhulelwe kufanele akwenze ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ngenxa yokuthi iminyaka yokukhulelwa incane, ukusetshenziswa kwezindlela zokuhushula isisu kulula futhi kunciphisa imiphumela engadingekile empilweni yabesifazane kanye nokunciphisa umthwalo ongokwengqondo. Ikakhulukazi, uma ushiya iminyaka yokukhulelwa inkulu njengamaviki angu-13, noma izinyanga ezi-4, 5 ukhulelwe, ukukhipha isisu kuyingozi kakhulu kungabangela izinkinga eziningi.
Izingozi omama ababhekana nazo ngesikhathi bekhipha izisu
Inqwaba yemibuzo ithunyelwe ebhokisini leposi Kubhulogi enesihloko esilandelayo: uyafuna ukukhipha isisu unamaviki angu-4 ubudala, ingabe kuyingozi empilweni yakho,… neminye imibuzo eminingi? omunye. Kodwa-ke, ukuhlaziya ngokucacile ukubaluleka kokukhetha amaphilisi okukhipha isisu ngaphansi kwamaviki angu-4, kanye nomthelela, singawahlanganisa kanje:
Okokuqala: Abesifazane abakhipha isisu emasontweni ama-4 bekhulelwe bazothinteka ngokwengqondo. Isizathu somthelela ongokwengqondo ukuthi kungakhathaliseki ukuthi ukukhipha isisu kuqala, noma ukukhipha isisu izikhathi eziningi, okungenani kuzothinta impilo yowesifazane okhulelwe. Ngakho-ke, lapho ukhipha isisu, kuyadingeka futhi ukucabangela nokuzilungiselela ngokwengqondo ngaphambi kokunquma ukuqeda ukukhulelwa.
UMsombuluko: Impilo isathinteka: Abantu abambalwa abanamaviki angu-4 bekhulelwe lapho benquma ukuyeka ukudonsa kwegazi (ngezindlela eziningi ezahlukene), basazoba nomthelela omncane empilweni yabo. Ukufudumala kokushisa komzimba, ubuhlungu obuncane besisu, ukungakhululeki, … kuyizimpawu ezivamile. Kodwa-ke, ukusebenzisa umuthi kusafanele kuvunywe uchwepheshe wezokubelethisa kanye ne-gynecology.
Iziyalezo zendlela yokukhipha isisu esinamasonto ama-4 ngamaphilisi
Ngokubona kochwepheshe basemtholampilo wase-Dong Phuong, lapho uhlose ukukhipha isisu esingamaviki angu-4 ubudala, into yokuqala okufanele uyenze ukuya esikhungweni sezokwelapha esikhethekile ukuze wenze i-ultrasound ukuze uqiniseke ukuthi umbungu ulele phansi. utero kanye nokuhlola impilo edingekayo.
Ukukhipha isisu kuphela ezimweni lapho impilo ivumela.
Uma kwenzeka ingane itholakala esibelethweni, isikhathi sokukhulelwa singamaviki angu-4, owesifazane okhulelwe akanazo izinkinga zempilo noma izifo eziyingozi (inhliziyo nemithambo yegazi, i-hemophilia, njll.) esebenzisa indlela yokwelapha yokukhipha isisu – lena yindlela yokuqeda isisu. ukukhipha isisu ngenyanga yokuqala.
Ukukhipha isisu ngomuthi onamaviki angu-4 ekhulelwe kulula kakhulu, kulula ukuyisebenzisa, kuyashesha futhi kuphephile, akubangeli (noma okuncane) ubuhlungu kowesifazane okhulelwe, futhi akuthinti ngokuqondile isibeletho, ngakho akubangeli monakalo. njengokutheleleka, ukubhobozwa kwesibeletho, noma izinkinga zokungazali.
Ukukhipha isisu ngokwezokwelapha.
Ukuqinisekisa impilo ephephe kakhulu, abesifazane abakhulelwe kufanele bakhethe ukukhipha isisu enamasonto ama-4 ngezidakamizwa ezikhungweni ezihlonishwayo ukuze bakhiphe isisu ngokwezinyathelo ezijwayelekile:
Isinyathelo 1: Ukuhlola okujwayelekile.
Ukuhlola impilo yowesifazane okhulelwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi uphile saka ngokwanele, ukuze kuqinisekiswe inqubo ephephe kunazo zonke yokuhushula isisu.
Isinyathelo sesi-2: Thatha iphilisi ukuze ukhulelwe iphilisi lokuqala.
Udokotela wakho ukunika iphilisi lokuqala lokukhipha isisu, elenza ukuthi isikhwama sokukhulelwa siphume olwelweni lwesibeletho.
Isinyathelo sesi-3: Thatha iphilisi lesibili lokukhipha isisu.
Udokotela wakho ukunika iphilisi lesibili lokukhipha isisu ngemva kwamahora angaba ngu-48 (izinsuku ezimbili) ukuze isibeletho sifinyele futhi siphushe ukukhulelwa.
Abesifazane abakhulelwe bazobona izigigaba ezinjengokopha, ubuhlungu besisu njengalapho besesikhathini, njll. Kuye ngesimo, udokotela angakunikeza inani elifanele lokudambisa izinhlungu.
Isinyathelo sesi-4: Yenza ukuhlolwa kabusha ukuze uhlole imiphumela nezinga lempumelelo; ngesikhathi esifanayo iyala abesifazane abakhulelwe indlela yokunakekela impilo yabo ekhaya.
Kodwa-ke, akuwona wonke amacala angaqoka ukukhipha isisu esinamaviki angu-4 ngezidakamizwa, isibonelo, esimweni sokukhulelwa kwe-ectopic, ukukhipha isisu sezokwelapha kungaba yingozi empilweni yowesifazane okhulelwe.
Uma kwenzeka owesifazane okhulelwe ehlushwa ezinye izifo ezifana ne-mitral stenosis, isifo se-adrenal gland, umfutho wegazi ophakeme, ukungezwani nezidakamizwa, ukwelashwa kwe-systemic corticosteroid yesikhathi eside, njll., le ndlela akufanele isetshenziswe ngoba ingandisa isikhathi eside ngokusho kwemiphumela emibi engadingeki, ngokuqondile. okuthinta impilo yabesifazane abakhulelwe, kungenzeka ukuthi baphuthelwe ukukhulelwa, i-placenta eshiywe …
Ngakho-ke, uma kwenzeka ukhulelwe okungahlosiwe futhi uhlose ukuqeda ukukhulelwa, kufanele uye ku-ultrasound ukuze ubone ukuthi umbungu ungenile yini esibelethweni noma cha (ngoba kukhona abantu abanezinyanga ezi-5 kuphela). wangena esibelethweni, inqubo yokukhipha isisu isengenziwa ezinyangeni ezi-4. Kodwa ochwepheshe batusa nokuthi isikhathi esiphephe kunazo zonke sokukhipha isisu yizinsuku ezingaba ngu-45, okwandisa amathuba okuphumelela, ukunciphisa izinkinga zokukhipha isisu kanye nezingozi ezingaba khona.
Ukukhipha isisu emavikini angu-4 ubudala
Uma ukuhushulwa kwesisu okuthatha amasonto ama-4 kwehluleka, abesifazane bangasebenzisa ezinye izindlela zokuhushula isisu njengokukhipha isisu okuphephile. Ngale ndlela, udokotela usebenzisa ithuluzi lokungenelela esibelethweni ukuze afise ukukhulelwa. I-Aspiration ngepompo kagesi isetshenziswa kwabesifazane kuze kudlule amasonto ayi-8. Ukuphefumula ngepompo yesandla, kunezimo ezi-2: Iphampu ye-valve yesandla e-1 isetshenziswa kwabesifazane kuze kube amasonto ama-4 sekwephuzile ukuya esikhathini. Iphampu yesandla enamavalvu ama-2 isetshenziswa kwabesifazane abeqiwe ukuya esikhathini kufika emavikini ayi-8. Ukukhipha isisu nge-aspiration nakho kuyinqubo yokuqeda ukukhulelwa engeyona inkimbinkimbi, kodwa kusengenzeka kube nezinkinga ezifana nokubhobozwa kwesibeletho, ukopha kakhulu, i-placenta egciniwe, ukukhulelwa okugejiwe, ukutheleleka. Izinkinga ngokuhamba kwesikhathi zingabangela ukungabi nabantwana, i-amenorrhea ngenxa yokunamathela kwesibeletho.
Ukukhipha isisu emavikini angu-4 ubudala.
Okufanelekile, abesifazane abakhulelwe kufanele baye ezibhedlela ezihlonishwayo noma emitholampilo yokuhushula izisu ukuze bahlolwe futhi benze ukuhlolwa okudingekayo, ngokusekelwe emiphumeleni yesimo sempilo yowesifazane okhulelwe kanye nengane.Odokotela bangeluleka ngezindlela ezifanele kakhulu.
Qaphela lapho ukukhipha isisu 4 amasonto ubudala
Ngokwemibono eyabiwe evela kodokotela bezokubelethisa kanye nodokotela bezifo zabesifazane, ukuze bakwazi ukukhipha isisu esinamasonto ama-4 ngendlela ephephile futhi ephumelelayo, kufanele kuncike ezicini ezibalulekile ezilandelayo.
Indlela enamasonto ama-4 yokukhipha isisu ngezidakamizwa isetshenziswa kuphela ezimweni lapho ukukhulelwa kusesibelethweni, uma ukukhulelwa kungaphandle kwesibeletho, akufanelekile neze ukusebenzisa amaphilisi okukhipha isisu ngoba lokhu kuyingozi kakhulu empilweni yowesifazane. owesifazane, abakhulelwe. Ngakho-ke, abesifazane kufanele benze i-ultrasound ngaphambi kokukhipha isisu sezokwelapha.
Ngaphezu kwalokho, ukunquma iminyaka yokukhulelwa kubaluleke kakhulu ekusebenziseni indlela yokukhipha isisu yezokwelapha, ngoba kuye ngeminyaka yokukhulelwa ehlukene, odokotela bazoba nezinkomba ezihlukene zokusebenzisa izindlela ezahlukene zokuhushula isisu.
Kuyadingeka ukwenza ukuhlolwa kwezifo zabesifazane ngaphambi kokwenza indlela yokukhipha isisu somntwana onamasonto ama-4 ngezidakamizwa.
Abesifazane abakhulelwe kudingeka bazise udokotela ngezimo zabo zezifo zabesifazane noma umlando wezokwelapha wangaphambilini ukuze odokotela bathole ukwelashwa okufanele nezindlela zokuhushula isisu.
Ukukhipha isisu enamasonto ama-4 ngezidakamizwa kudinga ukwenziwa ngokwenqubo efanele ezikhungweni ezikhethekile ezihloniphekile, ngaphansi kokugadwa okuseduze kochwepheshe, ukusebenza kahle kuzoba phezulu kakhulu nezinga lokuphepha nalo liphezulu. .
Ungasikhiphi isisu ngezidakamizwa ekhaya, ungathengi izidakamizwa ngaphandle bese usebenzisa ngaphandle kwencwadi kadokotela.
Uma ukhipha isisu ngokwezempilo ekhaya futhi unezimpawu ezinjengokopha, noma ubangela isiyezi, ukuquleka, kufanele ngokushesha uye esikhungweni sezokwelapha esinedumela elihle lezokubeletha kanye ne-gynecology ukuze uhlolwe kusenesikhathi nokwelashwa.
Ulwazi olungenhla ukuthi sabelana ngalo 4 amasonto ekhulelwe futhi ukukhipha isisu okuphephile ngethemba ukuthi kuzokusiza. Asikukhuthazi ukuhushula isisu uma umama kungadingeki ukuba akhiphe isisu. Nginifisela impilo enhle nonke.
Xem Thêm Top 17 khách sạn Phú Quốc với trải nghiệm đỉnh nhất | Muasalebang
Bánh wagashi là gì? Khám phá vẻ đẹp của wagasshi trong ẩm thực Nhật Bản | Muasalebang